Fianarana any ivelany : misokatra ny vatsim-pianarana Fulbright Program | NewsMada
Fianarana any ivelany : misokatra ny vatsim-pianarana Fulbright Program
Efa mandeha ny fisoratana anarana ho an’ilay vatsim-pianarana Fulbright program hahafahana manohy fianarana any Etazonia. Tsy hifarana ny fisoratana anarana raha tsy amin’ny 24 febroary izao.
Hatao amin’ny alalan’ny tranonkalam-pifandraisana avokoa ny famenoana ireo antontan-taratasy rehetra ilaina. Betsaka ny mason-tsivana ahafahana mifantina ireo mpandray anjara mendrika izany vatsim-pianarana izany.
Tsy maintsy teratany malagasy ary mipetraka eto Madagasikara ireo mpifaninana. Mila manana diplaoman’ny oniversite “Maitrise”, “Ingeniorat”, “Capen”…. Mila mahafehy tanteraka ny teny anglsiy ihany koa ireo mpandray anjara.
Tafiditra ao anatin’ny fifanarahana amin’ity fahazoana vatsim-pianarana ity ny tsy maintsy tokony hiverenan’ireo mpianatra nahavita fiofanana mifampizara amin’ireo tanora mitovy aminy eto Madagasikara.
18 pejy ny takela-pejy fisoratana anarana fenoin’ny mpiadina. Mila fenoina avokoa ireo fanontaniana ary tsy atao kitoatoa. Tsara raha tsarain’ireo mpampianatra mahafehy teny anglisy maromaro ny antontan-taratasy rehetra mba tsy hisy diso.
Zava-dehibe ireo pejy roa
Mirakitra ny tena zava-dehibe indrindra kosa ny pejy roa amin’ireo 18 ireo izay milazalaza ny mampiavaka ny tenan’izay mpianatra manokana miohatra ny hafa sy ny diplaoma ananana. Anisan’ny tena tsaraina ny vanomezan-danja ny lalam-piofanana izay safidina hatao any Etazonia. Ny antony mahatonga anao hianatra izany sy ny anjara biriky ho an’ny tanindrazana rehefa mahazo izany fiofanana izany.
Ankoatra ireo ny filazana ny zava-bita teo amin’ny fiainana toy ny fanaovana asa soa, filatsahana an-tsitrapo fidirana fikambanana, fanaovana fanatanjahantena indrindra ny zavatra mampiavaka ny tena manokana eo amin’ny fahaiza-manao.
Haharitra roa taona ny fianarana any Etazonia rehefa mahazo ity vatsim-pianarana Fulbright ity. Any amin’ny volana avrily taona 2018 vao hisy valiny avy any Etazonia ireo antontan-taratasy voafantina . Eo no fantatra ny oniversite hiofanan’ilay tanora. Any amin’ny volana aogositra 2018 kosa vao hanomboka ny fikarakarana ny fandehanan’ireo mpianatra hihazo an’i Etazonia. Ampian’ny masoivoho amerikanina ireo tsara vintana sy mendrika indrindra hanao ny taratasy rehetra hahafahany manohy fianarana amin’ny alalan’ity vatsim-pianarana Fulbright ity.